मध्यपूर्वको समाचार—विश्वदर्शन | ब्यूँझनुहोस्! अक्टोबर – डिसेम्बर २०१५
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको ईवी उर्दू एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुभेल वारे-वारे सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
मध्यपूर्व मानव सभ्यता सुरुवात भएको ठाउँ हो। मध्यपूर्वलाई प्राचीन समयका बहुमूल्य चीजबीजको खानी मानिन्छ।
कनानमा दाखमद्य बनाउनेहरू
सन्‌ २०१३ मा पुरातत्त्वविद्हरूले लगभग ३ हजार ७ सय वर्ष पुरानो निकै ठूलो कोठा भेट्टाए जहाँ कनानीहरूले दाखमद्य बनाउने गर्थे। त्यस कोठामा ४० वटा ठूलठूला घ्याम्पा भेटिए। अहिलेको ३ हजार वटा सिसीमा अट्ने दाखमद्य एउटा घ्याम्पोमा अट्थ्यो। घ्याम्पामा बाँकी रहेको दाखमद्य जाँचेर हेरेपछि एक पुरातत्त्वविद् कनानीहरू दाखमद्य बनाउन निकै सिपालु थिए भन्ने निष्कर्षमा पुगे। तिनले भने, “हरेक घ्याम्पोमा भएको दाखमद्य अलिकति पनि तलमाथि नगरी बनाइन्थ्यो।”
के तपाईंलाई थाह थियो? प्राचीन इस्राएलमा “असल दाखमद्य” बनाइन्थ्यो र ठूलठूला घ्याम्पाहरूमा राखिन्थ्यो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ।—श्रेष्ठगीत ७:९; यर्मिया १३:१२.
द गार्डियन अखबारअनुसार इजिप्टमा सन्‌ २०१० को तुलनामा सन्‌ २०१२ मा ५ लाख ६० हजार धेरै बच्चा जन्मेका थिए। इजिप्टको बसिरा अनुसन्धान कम्पनीका मेगेड ओस्मानले यसो भने, “इजिप्टको इतिहासमा यत्ति धेरै बच्चा पहिला कहिल्यै जन्मेको थिएन।” कोही-कोही विज्ञअनुसार यसैगरि जनसङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने इजिप्टमा पानी, उर्जा र खानेकुराको अझ धेरै अभाव हुनेछ।
के तपाईंलाई थाह थियो? बाइबलअनुसार परमेश्वरको उद्देश्य मानिसहरू ‘पृथ्वीमा भरिऊन्‌’ भन्ने थियो। ती मानिसहरूलाई केही कुराको अभाव नहोस् भन्ने उहाँको इच्छा थियो।—उत्पत्ति १:२८; भजन ७२:१६.
लुकाइएका सिक्काहरू भेटिए
इजरायलको राजमार्गनजिकै “चौथो वर्ष” भनेर कुँदिएको १ सय वटाभन्दा धेरै काँसाका सिक्काहरू भेटिए। “चौथो वर्ष”-ले यहूदीहरूले रोमीहरूको विद्रोह गरेको (इस्वी संवत्‌ ६९ देखि ७० सम्म) चौथो वर्षलाई जनाउँछ। त्यस विद्रोहले गर्दा यरूशलेमको विनाश भयो। उत्खनन निर्देशक पाब्लो बेट्जरले यसो भने, “रोमी सेनाहरू अघि बढिरहेको देखेर कुनै मानिस अन्त नजिकै छ भनेर त्रसित भएको हुनुपर्छ। त्यसैले तिनले आफ्नो सरसम्पत्ति कुनै दिन लिन आउने उद्देश्यले त्यहाँ लुकाएका हुन सक्छन्‌।”
के तपाईंलाई थाह थियो? रोमीहरूले यरूशलेमलाई कब्जा गर्नेछन्‌ भनी येशूले इस्वी संवत्‌ ३३ मा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। सुरक्षित हुन डाँडाहरूतिर भाग्नू भनी उहाँले ख्रीष्टियनहरूलाई आदेश दिनुभएको थियो।—लूका २१:२०-२४. (g15-E 09)
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प ब्यूँझनुहोस्! अक्टोबर २०१५ | पैसाप्रति सही दृष्टिकोण राख्नुहोस्